ဝါးခယ်မ : ၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ပင်မကော်မတီ နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ပင်မကော်မတီ နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ပင်မကော်မတီ ( ယာယီ ) ကို ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ ၂၈ ရက်နေ. စိမ်းလန်းစိုပြေ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တတိယ အကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ.စည်းခဲ့ပါသည် ။
ထို ယာယီကော်မတီ အား ၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ. ၀ါးခယ်မမြို. အသင်းတိုက်ရုံးခွဲတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပဉ္စမအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင်ပင်မကော်မတီအဖြစ်အောက်
ပါကျောင်းသားဟောင်းများဖြင့်တရားဝင် ဖွဲ.စည်းလိုက်ပါသည် ။
ဒေါက်တာအောင်နိုင် -------- ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်ခင်အေးမူ----------------- ဒုဥက္ကဋ္ဌ - ၁
ဦးစန်းဦး----------------------- ဒုဥက္ကဋ္ဌ - ၂
ဒေါက်တာသက်ရှည်---------- ဒုဥက္ကဋ္ဌ - ၃
ဒေါ်ဆွေဆွေသင်း------------- တွဲဘက် ဘဏ္ဍာရေး တာဝန်ခံ
ဒေါ်မီမီကျော်------------------- တွဲဘက် ဘဏ္ဍာရေး တာဝန်ခံ
ဒေါ်စံပါယ်ခိုင်------------------ တွဲဘက် တာဝန်ခံ
သတင်း ၊ အချက်အလက် နှင့် မှတ်တမ်းအဖွဲ.
ဦးတင်ရီ ----------------- တာဝန်ခံ
ပေါင်းစပ် ၊ ညှိုနှိုင်း ၊ ဆက်သွယ် ရေးအဖွဲ.
ကိုဇော်မင်းလွင် ---------- တာဝန်ခံ
ကိုမင်းဇော် ( ခ ) ကိုဇော်လေး
၁ ။ ပင်မကော်မတီသည် အထက ၁ ဆရာကန်တော.ပွဲများ နှစ်စဉ် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အဓိကထားဆောင်ရွက်ရမည် ။
၂ ။ ဆရာကန်တော.ပွဲဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ ချမှတ်ခြင်း နှင့် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင် / ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ။
၃ ။ နှစ်စဉ် ဆရာကန်တော.ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီများ ဖွဲ.စည်းနိုင်ရေးအတွက် တာဝန်ယူ စီမံပေးရမည် ။
စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သလို စီမံ ပံ့ပိုးပေးရမည် ။
၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရမည် ။
နှင့် အခြားလိုအပ်သော အဖွဲ.အစည်းများ ၊ စာသင်နှစ် အလိုက်ကျောင်းသားဟောင်းများကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက်တာဝန်ယူစီမံပေးရမည် ။
၇ ။ နှစ်အလိုက်ကျင်းပရေးကော်မတီ များမှ အပ်နှံသော စာရင်းဇယား ၊ ငွေကြေး စသည်များကို ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ ထိမ်းသိမ်းထားရမည် ။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 1:50 PM
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၁၀ ဦးမြောက် ၊ ဧရာဝတီ ၏ ၅ ဦးမြောက်...
နက္ခတ်ပညာရှင် ဦးဇေယျာကို ပြောတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ. ...
အမြန်လမ်း ရှစ်လောင်းပြိုင် သတင်း အစ-အဆုံး ( ၂ )
အမြန်လမ်း ရှစ်လောင်းပြိုင် သတင်း အစ-အဆုံး ( ၁ )
မွှေး -- ဆိုသော မြို.
၀ါးခယ်မ အထက ( ၁ ) - ၂၀၁၈ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပေ...
၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခြေခံ မူများ
၀ါးခယ်မ အထက ၁ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ပင်မ...
K စီးရီး Flanker များနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရ...
ရေပြာရေတပ် (Blue Water Navy ) ဆိုသည်မှာ - ဇွဲထွဋ်...
C602 ဒုံးပျံများ - မောင်ဟန်
2017 Myanmar Military Strength - Global Fire Power...